Madax Cover, Qaybo ka ridaya Wax u Khasaaray, saar Shell - Weiwo
dayactir for mashiinka beeraha
Aluminum ama copper alaabta
Qaybo dayactir loogu talagalay mashiinka cuntada
qaybaha kale aan joogto ahayn
Weiwo waxay ku socotaa qalabka mashiinka saxda ah ee saxda ah muddo 10 sano ah, waxaan soo saarnaa sida ku cad sawirada macaamilka ama shaybaarka, oo gebi ahaanba ka shaqeynaya sidii loo dabooli lahaa codsi kasta oo macaamil ah. kharashka sameynta alaabada ugu fiican, waxaan mas'uuliyad ka saareynaa inaan siino macmiil kasta taageero farsamo la sifeeyay ka dib adeegga iibka kadib, waxaan noqon doonnaa lamaanahaaga diiran ee ka shaqeynaya wadada nolosha.
1.Waxaan si sax ah u habeyn doonnaa si aan ugu adeegno baahiyaha shirkaddaada. Aaminaadu waa mudnaanta, sidaa darteed waxaan ku siinaa taageero farsamo oo hormaris ah iyo shaybaarro qiimo la'aan ah. 3.Waxaan dammaanad ka qaadeynaa horumar deg deg ah iyo tayo sarreysa oo ah qiimaha ugu tartamista badan 4.Receless tirada amarkaaga waa la dhameystiri doonaa 5.Waad nala soo xiriiri kartaa wakhti kasta waxaadna rajeyneysaa wixii walaac ah in la saxo. Qanacsanaantaadu waa mudnaantayada koowaad.
Laga soo bilaabo 2010, Weiwo way korodhay iyada oo ay ugu mahadcelinayaan farsamayaqaankeenna iyo ganacsiga joogtada ah ee macaamiisheena ku qanacsan. Waxaan ku horumaraynaa hal-abuurnimo isdaba-joog ah oo dammaanad qaadaya xitaa kuwa ugu sarreeya ee laga filayo in laga badiyo.
Waxaa la aasaasay ilaa 2010, waxaan ku kornay gudaha oo waxaan leenahay sharaf inaan u guurno caalamka. Maanta qaar ka mid ah macaamiishayada ugu sareysa waxay degan yihiin Yurub iyo Ameerika. Waxaan si weyn ugu hanweynahay xirfadleheena sayniska ah waxaanna taa beddelkeeda si xushmad leh ula dhaqannaa shey kasta.
u arkaan waxyaabaha oo dhan
koox xirfad Our ayaa ku hawlan soo saarka mishiino sanado badan oo aan lahayn waayo-aragnimo ballaaran si gaar ah oo ku saabsan waxyaabaha aan caadiga ahayn ee design farsamo, hababka geeddi-socodka iyo maaraynta tayada ...
wax kasta oo ku salaysan daacadnimo iyo adeegga Company Weiwo sameynayo, our mission waa inay la kulmaan oo dhan baahida macaamiisha, iyo waxaan diyaar u macaamiisha u shaqeeyaan si ay u horumariyaan a guul-guul iyo mustaqbal fiican yihiin ...
Our mashiin sax dayactir iyo qaybaha ku dhoofiyo Europe, USA, Japan iyo Australia, waxay sidoo kale si fiican u yaqaan in waxyaabaha our place.Our maxalliga ah ayaa si weyn loo codsatay in mashiinada xirxirida ...